GV Face: Fitokonana Tsy Mihinankanina, Fotoana Nigadrana, Sy Ny Fikatrohana Ao Bahrain sy Ejypta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2014 9:08 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, čeština , English, Swahili, عربي, English
Herinandro vitsy izay, nitokona tsy hihinan-kanina sy tany am-ponja i Maryam Al Khawajah sy Alaa Abd El Fattah. Nalaza ny diezy tao amin'ny Twitter mitaky ny famotsorana azy ireo any am-ponja ao Bahrain sy Ejypta.
Ao Ejypta, noafahana tamin'ny fandoavana onitra i Alaa herinandro vitsy lasa izay rehefa nahavita ny fitokonany tsy hihinan-kanina naharitra 40 andro tany am-ponja. Miandry fotoam-pitsarana vaovao izy ankehitriny ary voaràra tsy hivezivezy. Miditra amin'ny faha-47 andro amin'ny fitokonana tsy hihinan-kanina kosa ny anabaviny faravavy 20 taona.
Nisioka ny tolon'izy ireo isan'andro tao anatin'izay telo taona izay i Maryam sy Alaa, nanomboka tamin'ny “Lohataona Arabo” nahazo an-tsary ny eritreritr'ireo olona an'hetsiny manerantany. Manana mpanjohy maherin'ny 636 K ao amin'ny Twitter i Alaa ary manana mpanjohy eo amin'ny 101k eo kosa i Maryam.
Nahazo fanagadrana na natao fanadihadiana hatrany i Alaa nandritra ny androm-piainany isaky ny miova ny filoham-pirenena Ejipsiana. Tamin'ny taona 2006, nosamborina noho ny fandraisany anjara tamin'ny fihetsiketsehana milamina izy. Tamin'ny 2011, nigadra roa volana tany am-ponja izy, ka tsy mba nahita ny nahaterahan'ny zanany voalohany. Tamin'ny 2013, nosamborina indray izy ary nogadraina nandritra ny 115 andro tsy nisy fitsarana. Ary miatrika sazy 15 taona an-tranomaizina izy ankehitriny.